Moments Neshamwari 27
Hazvina here kutenda kuti vaAtlante vanogona kubhururuka? Kana zvakadaro, kutenda kwakadaro kunorevepi?
Plato zvimwe anga ari wekutanga kuziva nyika yekumadokero nenyika yakarasika yeAtlantis. Vamwe vanomutevera vakatora nyaya iyi ndokutaura pamusoro penhoroondo iyo yaakapa sekuuya kubva kuna tateguru vake, Solon, uyo waakataura kuti waipfuudza kubva kwaari kubva kuvapirisita vekare veEjipita. Ngano dzakawanda dzakaburuka mumhando dzakasiyana siyana, dzechitsuwa kana kondinendi yeAtlantis. Bacon akanyora nezvazvo, asi bhuku rinonyanya kuzivikanwa nderaIgnatius Donnelly: "Atlantis; iyo Nyika yeAntediluvia. ”Hatifunge kuti kune chero yevaya vakanyora nezveAtlantis, vakataura chero chinhu nezvekufambisa muchadenga, kana kugona kweAtlanteans kubhururuka.
Kwete kusvikira Madame Blavatsky aburitsa "Chakavanzika Dzidziso" mu1888 chero chinhu chakanyatso kutaurwa nezveAtlanteans uye kubhururuka. Mu "Chakavanzika Dzidziso" Madam Blavatsky vanoti, nemaAtlanteans, kufamba muchadenga ichokwadi uye iye anopa huwandu hwenhoroondo nezvechikonzero chekudonha kweAtlantis uye nekufamba kwemhepo kwakabatsira sei pakudonha. Madam Blavatsky haatauri rukudzo rwezvakawanikwa izvi kwaari. Anoti mune "Chakavanzika Dzidziso" icho chaanotaura chakapihwa kwaari kubva kunhoroondo chaiyo yeAtlantis, chakatorwa kubva munhoroondo dzeavo varume vakangwara avo vanga vasingafi uye vanochengeta uye vanopfuudza nhoroondo yekumuka nekudonha makondinendi pamwe nekushandurwa kwemamiriro ekunze uye dzimwe shanduko dzepasi, zvine chekuita nekukura kwemarudzi uye kusimuka uye kudonha kwenzanga dzayo munguva dzese. Munyori wemubvunzo uye nevamwe vanganzi "Chakavanzika Dzidziso" vangave vasingawanikwe vanofarira mukwidzwa unotevera kubva kubasa:
"Zvinobva paChina Chikumi kuti vekutanga maAryan vazive nezve 'banda rezvinhu zvinoshamisa,' Sabha naMayasabha, vanotaurwa muMahabharata, chipo cheMayasura kuPandavas. Zviri kubva kwavari kuti vakadzidza aeronautics, Viwan, Vidya, iyo 'zivo yekubhururuka mumotokari-mota,' uye, saka, hunyanzvi hwavo hukuru hweMeteorography neMeteorology. Zviri kubva kwavari, zvakare, kuti maAryans vagara nhaka yavo yakakosha sainzi yesimba rakavanzika remamwe mabwe anokosha uye mamwe matombo, zveChemistry, kana kudaro Alchemy, weMineralogy, Geology, Fizikiki uye Astronomy. ”(3d Ed. Vol. II. , peji. 444.)
"Heino chidimbu chenyaya yekutanga kubva kuChidimbu:
“'. . . Uye 'Mambo Mukuru weChiso Chinotenderedza,' iye mukuru wevose-vane kumeso, aive akasuwa, achiona zvivi zvevatema.
“'Akatumira ngoro yake (Vimanas) kuvakuru vake vese (madzishe edzimwe nyika nemadzinza) nevarume vanotenda mukati, achiti: Gadzirira. Simuka, varume veMurayiro wakanaka, uye muyambuke nyika iyo yakaoma.
“'Ishe ve wedutu vari kusvika. Ngoro dzavo dzava kusvika pedyo nenyika. Humwe husiku nemazuva maviri chete maIshe veRima kumeso (ivo Mashura) vanogara pane ino nyika yevarwere. Iye asvika, uye ivo vanofanira kuburuka naye. Masheya emaNgezi eMagetsi (iyo Gnomes neMoto Elementals) vari kugadzirira mashiripiti avo Agnyastra (zvombo-zvemoto zvakashandiswa naMagic). Asi maIshe veRima Ziso ("Ziso rakaipa") vakasimba kupfuura ivo (maElementals) uye ivo varanda vevane simba. Ivo vanoziva muna Astra (Vidya, ruzivo rwemashiripiti rwepamusoro). Huya ugoshandisa yako (ie, masimba ako emashiripiti, kuitira kuti udzivise iyo yevaRoyi). Tenzi wega weChiso Chinotekenyedza (Chibvumirano cheNoyera Mashiripiti) ngaaite kuti Vimana waIshe wega weRima Nerufu apinde mumawoko (kana kuti atore), zvimwe chero (wevaRoyi) ngaatize munzira yake , dzivirira tsvimbo yeVanhu vana (Karmic Deities), uye ponesa vakaipa vake (vateveri, kana vanhu). ' .. (Ibid, peji 445.)
“(Asi) marudzi aive zvino ayambuka nzvimbo dzakaoma. Dzakanga dzodarika watermark. Madzimambo avo akasvikawo muVimanas yavo, uye akavatungamidza kuenda kunzvimbo dzeMoto neMetal (East neNorth). ' ”
Mvura yakasimuka, ikafukidza mipata kubva kumugumo wevhu kusvikira kuno mumwe. Nyika dzakakwirira dzakaramba dziripo, iyo pasi pePasi (nyika dzepamberi) dzakaramba dzakaoma. Kwaigara avo vakapukunyuka; ivo varume veYellow Faces uye neziso rakatwasuka (ivo vakashata uye vane mwoyo yakatendeseka).
"'Zvino Mbuya veRima Nzvimbo pavakasimuka uye vakazvitakura veVans yavo kuti vatize kubva mumvura iri kusimuka, ivo vakawana vasisipo.' .. (ibid. p. 446.)
Ndivo ivo vari kuedza kugadzirisa dambudziko rekufamba kwepanyika, vakazvarwazve veAtlantean?
Mukufungidzira kwakawanda pfungwa zhinji dzakashanda kuburikidza nemitumbi yeAtlantean dzave kuonekwazve mune budiriro iyo ikozvino iri kuvakwa, budiriro iyi ine muzinda wayo muUnited States nemapazi ayo nemafudzi ari kusvika kumatunhu ese epasi. Mukukwanisika kose ivo vakagadzira zera rino ndevaya pfungwa dzakashanda kana kurairidzwa mune sainzi yeAtlantis uye vari kukonzeresa kuti zviwanikwe zvakafanana mune zera redu izvo zvavakajaira muAtlantis. Pakati pezvakagadzirwa ndeye yekubhururuka. Kugona kwekubhururuka kwemunhu, kana kufamba-famba kwemhepo, kwakasekwa nekusekwa kusvika nguva dzichangoburwa, uye pfungwa dzakanyanya "yesainzi" dzakaseka zano iri kana kutaura nezvazvo sedhisus fatuus kana kutenda mashura. Kugadzirwa kwenhandare yendege uye bhandi rinofungidzirwa kwakaratidza kuti kufamba kwemhepo kunogoneka, uye izvo zvaitwa zvinoratidza kuti panguva isiri kure murume achakwanisa kufambisa nzira yake kuburikidza nemhepo zvinobudirira sezvaari kuita nzira yake. kuburikidza nemvura. Pfungwa dzemurume dzinokurumidza kukunda zvinetso zvechikepe chekufamba. Asi haasati awana nzira uye haakwanise kubata nenzira dzinobhururuka nendege. Munhu anogona kubhururuka nyore seshiri dzava kubhururuka, asi chete kana adzidza kubata uye kushandisa simba rinoshandiswa neshiri mukubhururuka kwavo. Shiri haingotsamiri pasimba remuviri kuti ibhururuka. Vanodaidzira kushanda kwesimba risiri romuviri uye ravanobata nemiviri yavo uye rino fambisa miviri yavo. Shiri hadzivimba nemapapiro avo pasimba rekubhururuka. Ivo vanoshandisa mapapiro avo uye muswe zvakanyanya seyero kana lever iyo iyo iyo muviri unoenderana uye inotungamirirwa kuburikidza nemafungu emhepo. Munhu anogona nemuviri wake izvo zvino shiri zvavanoita nezvavo, kana, munhu anogona kuvaka michina yaanogona kufambisa mhepo. Anofambisa mhepo, achibudirira zvakanyanya chete kana adzidza kugadzirisa uye kurongedza simba riri mukati make nemakina anobhururuka aanogona kuvaka. kana murume akagona kuita izvi muzera rino zvingangoitika uye zvakanyanyisa kuti murume akamboita zvakapfuura. Zvinogona kuitika kuti maAtlante aive neruzivo rwemasimba anoita kuti kubhururuka uye ave kugona kuita kuti simba iri riite kuburikidza nemiviri yavo, nokudaro vachiita kuti vabhururuke, uye nekugadzirisa iwo simba rimwechete kumashini emuchadenga, nekudaro vachiratidzira kubhururuka. zvemakina akadaro maererano nezvaanoda. Pfungwa dzinozvara patsva kubva pazera kusvika kune rimwe zera, kubva kune rumwe rudzi rwemuviri kuenda kune rumwe. Pfungwa dzemurume hadzina kudzidziswa uye kuve dzakakwana murudzi rumwe kana budiriro. Izvo zvinodikanwa kuti pfungwa dzipfuure dzakawanda kana dzese madzinza uye budiriro mukukura kwayo zvishoma nezvishoma. Zvine musoro kufunga kuti pfungwa dzakabatanidzwa nemubvunzo kana maitiro echikepe chekufamba ari iwo mweya mumwechete anga aine chekuita nedambudziko muAtlantis.
Dai maAtlantei ainge agadzirisa dambudziko rekufamba kwemazuva, uye kana avo vari iye zvino vane dambudziko rimwechete vaiva vaAtlante, saka nei vanhu ava vasina kuberekwazve kubvira pakunyura kweAtlantis uye isati yasvika, uye kana vakadzoka zvakare nguva yemazuva ano, nei vasina kukwanisa kuziva mhepo kana kuti kubhururuka zvisati zvaitika panguva ino?
Kuti maAtlanteans akagadzirisa dambudziko rekufamba muchadenga harisati rabvumidzwa, kana kuti hazviratidzike kuti Atlantis yakavapo. Zvirinani hazviratidzwe nechero ipi yeavo chiratidzo chinodikanwa nesainzi yemazuva ano. Huchapupu hwakawanda hwakapihwa kuti Atlantis yakavapo, seiya yakataurwa kana kuti yakapihwa neGungwa reSargassa. Asi kana vanhu varipo vanogona kugadzirisa dambudziko rekufamba kwemhepo, hazvina musoro kufunga kuti hunhu hweAtlantis hungadai hwakazvigadzirisa. Kana kuberekwa patsva chiri chokwadi, zvinokwanisika kuitika, zvirokwazvo ndezve chokwadi, kuti kana ivo vanogara nhasi uye vachigadzira michina yavanofamba nayo mhepo vaiziva nezvechinetso chakange chiri muAtlantis, uye kuti vakaberekwazve. munyika dzakawanda kubvira pakakandwa pasi peAtlantis. Asi, izvo zvaigoneka panguva imwechete mukubudirira kukuru zvingave zvisingakwanise panguva imwe neimwe mune imwe neimwe kubudirira. Izvo hazvitevere kuti nekuti mumwe munhu pfungwa anga agadzirisa dambudziko remuchadenga muAtlantis anofanirwa kugona kubhururuka kana kuvaka michina inobhururuka mune mimwe mitumbi mune dzimwe nyika uye nenguva dzisina kurongeka.
Kufamba kweairesi isainzi, zvisinei, inongova imwe yesayenzi. Zvinoenderana uye hazvigone kuita pasina humwe sainzi. Kutozosvikira mamwe masainzi akagadziriswa rutivi rwekufamba-famba muchadenga kwaisakwanisa kuwanikwa. Kuziva kwesainzi senge makanika, kwenjanji, chemistry, magetsi, anodiwa kuti mweya wekufamba uchibudirira ubudirire. Chero chipi zvacho chakakosha ruzivo rwepfungwa chingave neicho mukati paruzivo rwayo uye nesimba raro uye kugona kubhururuka, zvakadaro kusvikira zvigadzirwa zvepanyama zvakagadzirwa uye kusvikira pfungwa dzaziva tsika nemirairo inodzora miviri yemuviri, hapana ngarava dzemuchadenga kana michina zvinogona kuve yakavakwa zvakanaka kana kushandiswa. Chete munguva dzemazuvano idzi sainzi idzi dzakagadzirwazve kana kuwaniswazve. Chete kana ruzivo rwavanopa rwaive kana rwashandisirwa kubhururuka nemhepo, zvine musoro kufunga kuti kungofamba nendege kunogoneka. Zvingangoita kuti vekare vaive neruzivo rwesainzi, asi vakatisiira marekodhi akadai anodiwa souchapupu kuratidza kuti vaive neruzivo rwekusevenzesa kwese kwese sainzi pamwe chete, sezviri kuita zvinhu zvishoma nezvishoma.
Pfungwa dzemunhu akazvarwa patsva mune chero nyika dzeEurope kana Asia mukati memazana mashanu emakore apfuura hazvingawane mamiriro akakodzera ekuvaka airship uye kubhururuka mukati mazvo. Dai pasina chimwe chikonzero, saka nekuti rusaruro rwechitendero chenyika zvingadai zvakamutadzisa kushandisa zivo iyo yaangadai akashandisa muAtlantis. Semuenzaniso: kana zvese zvemavara zvinyorwa zvesainzi yemazuva ano zvakabviswa kubva pasi uye vamwe vedu vatambi vakuru nemasayendisiti vaizofa nekuzvarwa patsva mune imwe nzvimbo yepasi kwete mukubatana neazvino chitema, mukuru pane aya masayendisiti uye maumbirwo hazvingagone muhupenyu ihwohwo kuti vape izvo izvo izvo zvebudiriro zvavakange vasiya. Chavaigona kuita kunyangwe neruzivo rwekuti ivo vakararama uye vaiziva uye kuita izvo zvinozivikanwa kuti zvave kuitwa hazvingavakwanise ivo kuita chimwe chinhu pasi pekushanduka mamiriro. Chainyanya chavaigona kuita kuve kuita semapiyona. Ivo vaizosungirwa kudzidzisa vanhu vavakaberekerwa patsva kuti vanzwisise mikana yekumberi, kuziva vanhu nezvimwe chokwadi, uye kuvadzidzisa kuti vanzwisise kwekutanga kwesainzi. Hupenyu humwe chete hwaisavatendera nguva yakakodzera yekuvaka mamiriro uye kudzidzisa vanhu kusvika pakushuva kwezvakanakira zvazvino. Kungofanana nedzimwe pfungwa dzepamberi dzakange dzakaverengeka pakati pevanhu, uye nepfungwa dzepamberi dzairamba dzichiva mumuviri uye “kuwana” mimwe mitemo nekuvandudza maindastiri netsika dzenyika, zvaizogoneka kuita nzvimbo yekubudirira. Zvakatora mazera kuti vanhu vadzidziswe uye vakudziridzwe kuva mamiriro azvo, mushure mekunyura murima zvichitevera kudzikira kwedzidziso dzepamberi. Sezvo hunhu hunobuda murima nekusaziva uye rusaruro uye nepfungwa dzakadzika mumuviri zvadzisunungurwa, ipapo izvo zvakavapo mune zvebudiriro zvinogona zvakare, zvichazouyazve, nekunatswazve. Isu tiri sezviri pachena tiri kusvika nguva yekudzokororwazve kwezvinhu zvakafungidzirwa sezvishamiso, asi izvo zviri kuita zvishoma nezvishoma zvinodikanwa uye zvikamu zvehupenyu hwedu. Kunyangwe ivo vanhu vaigara muAtlantean miviri uye vaifamba-famba mhepo, vanofanirwa kuve neakawanda kuberekwa patsva kubva kunyura kweAtlantis, uye kunyangwe mwaka nenguva zvakadzivirira kushandisa kwavo ruzivo rwekufamba nendege, nguva yave pedyo apo vanhu ava vangangodaro. daidzira kune ikozvino ruzivo rwavo rwepamberi, nekuti mamiriro acho akagadzirira uye ivo vachakwanisa kugona mhepo uye kubhururuka mune ramangwana sezvo ivo vaive masters emhepo mu Atlantis yakanganikwa.